Shan shay oo ku saabsan Android oo aan jeclaan lahaa inaan ku helo iOS | Wararka IPhone
louis padilla | | Android, macruufka 10
Waa wadahadalka weligiis ah markaan ka hadlayno iPhone ama telefoon kasta oo kale oo Android ah, oo aanan sidoo kale iska dhigin inaan ka jawaabayo xogta ku jirta qodobkan. Android ama macruufka? Waxaan ka heli karnaa maqaallo ku habboon labada nidaamyada hawlgalka, iyo labadaba. Waxay kuxirantahay hadba qofka aad weydiiso, waxay kuu sheegi doonaan midka ama midka kale, waxayna kusii socon doontaa sidan tan iyo weligeed. Laakiin waxa gebi ahaanba run ah waa inay jiraan shaqooyin hal nidaam ah oo dadka isticmaala kuwa kale u ooman yihiin, iyo taa lidkeed. Muddo ka dib adoo isticmaalaya Moto G4 Plus taleefan labaad Waxaan helay ugu yaraan shan astaamood oo Android ah oo aan jeclaan lahaa inaan ku arko iOS, ka dibna waan kuu sharaxayaa.
1 Ogeysiisyada ku yaal shaashadda qufulka
2 Tirtir codsiyada furan hal tilmaam
3 Qaabeynta arjiga laga soo bilaabo boodhka
4 Wax ka beddelka toobiyeyaasha
5 Miyay intaas ka badnaan karaan?
Ogeysiisyada ku yaal shaashadda qufulka
Maaha inaysan jirin wax on iOS ah, taasi dabcan way jiraan, laakiin Waxaan jeclahay faahfaahin aad u fudud laakiin mid naga badbaadin laheyd isticmaaleyaasha macruufka waqti badan: inaan si dhaqso leh uga saaro, oo ah tilmaam fudud adigoo u rogaya midigta, iyadoon loo baahnayn inaad marka hore siibato ka dibna riix badhanka "tirtir" ee muuqda. Waxaan kale oo aan jeclahay sida ogeysiisyada loo qeybiyay iyadoo kuxiran dalabka adiga kuu soo diraya.
Tirtir codsiyada furan hal tilmaam
Adeegsade kasta oo uu leeyahay Jailbroken waxaa hubaal ah inuu haysto codsi uu ku xirayo dhammaan codsiyada aad ku furtay istaroogga. Waa run in macruufka uu u maamulo xusuusta nidaamka qaab gebi ahaanba ka duwan, taas oo sida ay khubaradu sheegeen aan loo baahnayn, qaarkood ayaa xitaa sheeganaya inay kordhin karto isticmaalka batteriga. Laakiin wali waa tilmaam aan dhamaanteen sameyno waqti ka waqti, iyo in Android lagu sameyn karo adigoo riixaya badhanka fudud.
Qaabeynta arjiga laga soo bilaabo boodhka
Ku haynta astaanta codsi barta hoose ee 'Androidboardboard' waxay ku siineysaa fursado badan oo ka badan kan macruufka. Nidaamka Apple waxaad kaliya ka saari kartaa, wax sidoo kale macquul ku ah Android, laakiin waxaad sidoo kale marin toos ah ugu leedahay shaqooyinka kale sida inaad awood u leedahay inaad tafatirto astaanta iyo magaca dalabka, ama waxa ka wanaagsan, maaraynta ogeysiisyadeeda. Imisa jeer ayaad dooneysay inaad ka saarto ogeysiisyada ciyaar xanaaq badan oo ay ahayd inaad gasho goobaha, raadiso ciyaarta, gasho liiskeeda, marin u hesho xulashooyinka ogeysiinta ka dibna aad demiso? Inaad marin toos ah uga hesho xulashadan astaanta guga lafteeda waa mid aad u habboon oo aad u dhaqso badan. Dhanka kale, waxaad sidoo kale ka aamusi kartaa ogeysiiska dalabka ogeysiiska laftiisa, oo waliba ah bedel aad u wanaagsan.
Wax ka beddelka toobiyeyaasha
Mid kale oo ka mid ah codsiyada weligiis ah ee isticmaalayaasha macruufka: si loo awoodo in wax looga beddelo xarunta xakamaynta macruufka maadaama lagu samayn karo Android. Marka lagu daro inaad heysato howlo badan oo deg deg ah, Android waxay ku siineysaa fursad aad ku tirtiri karto kuwa aadan isticmaalin oo aad ku darto kuwa aad ugu baahan tahay. Doorashadan ayaa waxoogaa ku qarsoon boosteejooyinka qaar, oo leh inay kiciyaan xulashooyinka horumariyaha, laakiin raadin yar oo Google ah oo aad si dhakhso leh u xalliso dhibaatadaas.
Miyay intaas ka badnaan karaan?
Sida iska cad waxaa jira waxyaabo kale oo aan jeclahay, iyo qaar badan oo aanan jeclayn, laakiin kuwani waa shanta hadaad i weydiiso aan dooran lahaa inaan ku daro iOS. Qaar idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay isku raacaan qaar ka mid ah, ama laga yaabee inay isticmaaleyaal aad u horumarsan ay u maleynayaan inay fiicantahay in lagu daro xulashooyin kale oo "badan" oo aad u badan, laakiin kuwani waa shanteyda. Haddii aad hayso wax soo-jeedin ah, ka faallo halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Shan shay oo Android ah ayaan jeclaan lahaa inaan ku helo iOS
Xaaladdayda, inaan haysto 6s, maalmihii ugu dambeeyay waxaan ka fiirsanayay wax badan oo aadaya s7. Asal ahaan maxaa yeelay waan ka daalay nolosha batteriga oo aad u gaaban, iyo in marwalba aan qaado fiilada ama adabtarada maxaa yeelay hadaanan shiilneyn… maxaa yeelay dhammaantood waxay wada isticmaalaan isku fiilo, iPhone waa midka kaliya ee ugu fiican. Si toos ah waxaan marwalba ugu isticmaalaa taleefanka habka keydinta (oo si daacadnimo ah uga baxsan qufulka shaashadda daqiiqad kadib, ma helayo isbeddel kale oo isticmaalka ah)
Aad ayaan ula qabsaday macruufka tan iyo markii laga soo bilaabo iPhone 3G oo aanan isticmaalin mobiil kale oo dhaafsiisan dhacdooyinka qaarkood, laakiin hadda waxaan aad uga shakisanahay in iPhone uu leeyahay faa iidooyinka astaamaha marka la barbar dhigo Galaxy S7 tusaale ahaan ... waxaan runtii u maleynayaa maaddaama macruufka 7 uusan xitaa ku dhufanaynin sharraxaadda is-dhexgalka ... in kasta oo saameynta Badeecadda, NC iyo CC ay cajiib tahay, haddana waxay cunaan baytari aad u badan, dhadhamigaygana shaashadda oo midabbo badan leh ayaa noqotay mid aad u qashin ah. Waxaan rajeynayey inay wax iska badalayaan iOS 10, laakiin si adag ayaa laygu cadaadiyay inaan arko in isbadalada ugu muhiimsan ay yihiin barnaamijka fariimaha ee ka shaqeeya kaliya inta udhaxeysa iphone iyo Widgets ka oo aan helay fiasco aad u weyn ... aad bay u adkeyd in la isticmaalo 3D Touch si marka aan u riixayo astaanta barnaamijka, ma ii tusi doontaa ikhtiyaarka aan ugu beddelayo widget meeshaas anigoon u baahnayn inaan aado qayb ay i tuseyso liis xun. U beddelo astaanta Cimilada, tusaale ahaan, wax dhex fadhiya laba astaamood ama isku xigxiga haddii aad rabto inaad muujiso macluumaad adoon furin barnaamijka, ku dar calaamadda 2aad meesha lagu raaco ... xulashooyinka tooska ah ee tooska ah ee leh 5D Touch Menu astaanta goobaha, halkii aad toos uga heli lahayd qaybaha ku dhex jira barnaamijka ... iwm iwm. Way fiicantahay in la helo shaashad ogaata heerarka cadaadiska, laakiin waxaan ku qanacsanahay inaysan ka faa'iideysan shaqeyntaas gabi ahaanba.
Ugudambeyn, macruufka 10 wuxuu umuuqdaa mid lamid ah 9 dhalaalaya marka loo eego OS-ga cusub laftiisa, laakiin wali aan shaqo badan hayn
Ku jawaab EzeNH
Ku saabsan ogeysiinta shaashadda qufulka:
Way ka sahlan tahay tirtirka mid mid.
Hoos u dhigida xarunta ogeysiinta iyo kor u qaadida mar labaad ayaa DISAPPEAR ogeysiisyada ka soo baxaya shaashadda xiran.
Haa, waxay joogaan xarunta wargelinta, waxaad xiiseyneysaa inaad gebi ahaanba tirtirto, waad sameyn kartaa, dhammaanteen waan ognahay sida (iskutallaabtaas).
Waxaan arkay dad badan oo adiga ku jeclaystay, oo mid mid u tirtiray, laakiin hoos u dhigista xarunta ogeysiinta ayaa aad uga dhakhso badan, waxa intaas ka sii badan, waxaan u maleynayaa inaadan xitaa u baahnayn inaad hoos u dhigto gebi ahaanba, iyadoo laga saarayo wax yar oo ay baabi'inayaan Waxaan qabaa.
Xaqiiqdii waxaan rabaa wicitaanada in la xannibo iyada oo aan la heysan aqoonsi soo socda.
Qeexitaanka qaar ka mid ah iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ayaa daadanaya